Caalamka, 02 January 2017
Isniin 2 January 2017
Daacish oo Sheegatay Weerarkii Istanbul
Kooxda Daacish ayaa sheegatay mas’uuliyadda weerarkii sanadka cusub lagu qaaday baar lagu caweeyo oo ku yaalla magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, kaasi oo lagu dilay 39 qof.
Qaraxyo ka Dhacay Ciraq oo 37 Qof lagu Dilay
Ugu yaraan 37 ruux ayaa ku geeriyootay 25 kalana dhaawacyo ayaa kasoo gaaray laba qarax oo waa weyn oo maanta ka dhacay dalka Ciraq.
N. Korea oo u dhow Sameysashada Gantaalada Ridada Fog
Madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegay in dalkiisa uu hada marayo heerki ugu danbeeyey ee gabagaba horumarinta gantaalada isaga kala goosho qaaradaha.
Istanbul oo Markale La Weeraray
Ugu yaraan 31 ruux ayaa ku geeriyootay kadib marki nin hubeysani uu weeraray goob lagu caweeyo oo kutaala xaafada Orta-kooy degmada Beshiktash ee magaalad Istanbul.
Golaha Amaanka oo Ayiday Xabad-joojinta Suuriya
Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa si aqlabiyad leh u ayyiday xabad joojinti ay Dowladaha Ruushka iyo Turkiga kasoo shaqeeyeen oo Jimcihi ka dhaqan gashay dalka Suuriya.